5% Kuvhura Vagadziri & Vatengesi - China 5% Kuvhura Fekitori
Sheer Elegance Zuva Mumvuri weSuscreen Mesh Curtain Inopofumadza PVC Machira
Chigadziko cheScreen chezuva rinoshanda rinobatsira rezuva jira rekuvhara chiedza chezuva uye kupenya kwezuva. Inowanzo shandiswa kuvhara zvinhu kuti usabate nechiedza chakasimba uye ine mhedzisiro yekuvharira mwenje wakasimba uye mwaranzi yeultraviolet nezvimwe zvinhu.
Chaizvoizvo, zvakajairwa mesh skrini yemucheka kudzima magetsi inosvika 85% -99%, iko kuvhurika kunosiyana kubva pa1% -15%, murazvo unodzora basa unowanikwa uine zvachose murazvo unodzora maitiro.
Dzidza Chiedza chezuva Kuchenesa Bhizimusi Sunscreen Roller Blind Window Shades
Sarudza roller roller inopofumadza yekudzidza
1. Ruvara runoda kuenderana nezvinhu zvemukati.
Paunenge uchisarudza mapofu, zvakanakisa kutarisisa kune rumwe ruvara rweimwe fenicha muchidzidzo, kunyanya iro bhaisikopo. Midziyo yemazuva ano inonyanya kukosha mukubatana kwese. Paunenge uchisarudza iwo ruvara rwemapofu, kana isu tikatarisa kune iro ruvara rwemidziyo. kuenzanisa ruvara rwemidziyo, chidzidzo chinogona kuvakwa zviri nani.
Gadzira Sunscreen Jira Kubva kuChina Blinds Fekitori Sheer Elegance Sunscreen Blinds
Anopofumadza skrini yemavara mechi
Mukushongedzwa kwemba, isu tinowanzo tarisa vara rekugadzira yekushongedza imba. Mushure mezvose, hapana kukanganisa kukuru muvara, asi zvakawandisa, uye hazvidzivirike kuti zvinofinha zvishoma! Uye iyo yekushongedza imba yekuvara haigone chete kuita kuti imba ive yakajeka, asi zvakare kuunza akasiyana manzwiro kune vanhu vane akasiyana mavara. Saka maitiro ekushongedza imba ine mavara? Ndokumbirawo uteedzere Groupeve kuti utarise!
Kunze Manual Hwindow Shutter Hafu Shade Dual Layer Electric Double Roller Blinds
Kushandiswa kweGroupeve rezuva rembizi jira
1. Zvivakwa zveruzhinji (jimunasiyamu, horo yemitambo, nhandare yendege, nzvimbo yekuratidzira)
Micheka kazhinji inoda kusangana neB1 nhanho (oxygen index -32) moto uye murazvo unodzora zviyero
2. Chivako chemahofisi (hofisi, nzvimbo yemusangano, nzvimbo yekuchengetedza)
Kutarisana kumabvazuva nekumadokero kazhinji sarudza machira ane 1% -3% kuvhurika; yakatarisana kuchamhembe kazhinji inosarudza machira ane 10% kuvhurika; yakatarisana kumaodzanyemba kazhinji inosarudza machira ane 5% kuvhurika.
China Kumba Kushongedza Solar Shade Window Sunscreen Roller Blind Micheka Wholesale muChina
Roller Bofu Mucheka
Nekuvandudzwa kwehupenyu hwehupenyu, vanhu vane yakakwira uye yakakwira zvinodikanwa zverangu mumvuri wewindow machira. Vashandisi havacha tarise chete kuhunhu hunhu hweChina sunscreen roller machira machira akawanda muChina, asi zvakare cherekedza zvakanyanya kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kwemachira epamba. Naizvozvo, akawanda-anoshanda ehupfumi emumvuri jira ari kuramba achiwedzera kujeka.
Kupisa kupisa uye kuchengetedza simba
Shading micheka ine yakanaka yekuputira yekuisa inoonekwa isina mamwe machira, ayo anogona kunyatso kuvharira kupisa kunogadzirwa nemwenje yezuva, ichideredza zvakanyanya mwero wekushandiswa kwemukati mekupepetesa mweya, ayo anogona kubvisa kusvika ku86% yemagetsi ezuva uye kuchengetedza mweya wemukati wakatsetseka. uye unogona kunakidzwa nemaonero akanaka kunze kwehwindo zvakanaka.
Wholesale china suppliers'office windows machira ane mota roller roller inopofumadza shades
Mabasa emagetsi roller roller
1.save simba uye chengetedza nharaunda
Roller shutter madhoo uye mahwindo ane hunhu hweakanaka uye enoveji chimiro, compact uye epamberi dhizaini, nyore mashandiro, ruggedness, yakasimba kuomarara, yakanaka chisimbiso, hapana chinzvimbo chevhu nzvimbo, inochinjika uye inokodzera kuvhura nekuvhara, nezvimwe, izvo zvakabudirira kubudirira izvi mukupindura iyo yepakati simba-yekuchengetedza uye yekuchengetedza nharaunda mutemo.
2. Kudzivirirwa kunotonhora
Magetsi roller roller inopofumadza ine yakanaka chaizvo yekuisa chisimbiso mashandiro, inogona kuwedzera mhedzisiro yekudzivirirwa kwechando, uye inokodzera kwazvo yako yekushandisa pamba
China Windows Sun Shade Polyester Inotenderedza mota Inopofumadza Mucheka
1.Anti-yakaipa mamiriro ekunze
Izvo zvakasarudzika zvinoshandiswa mumagetsi emagetsi emagetsi zvinoita kuti zvimire kune ese marudzi ezvinhu akaomarara, ayo asina kufananidzwa nemamwe akareruka maketeni ekushandisa pamba.
Iyo yemagetsi shutter hwindo dhizaini yakasimba, yakasimba uye yakaoma, iyo inogona kudzivirira zvakajairika mbavha kubva pakubata uye kuchengetedza hupenyu hwako nepfuma munzira dzese.
Shutter Window Sunscreen Yakagadzirwa Chitubu Roller Blind Micheka
Windproof inopofumadza kuzadzisa imba.
Nekuvandudzika kwenzanga, vatengi uye vatengi vari kutsvaga mamiriro ekuvhenekesa nenzvimbo yekunze. Nekudaro, pasi pechitarisiko chakajeka chezvivakwa zvegirazi, pane matambudziko mazhinji: greenhouse athari, simba rakawanda rekushandisa, mwenje yezuva Nekutsvaga kwevanhu kuchengetedza kwezvakatipoteredza, girini, chengetedzo uye zvimwe zvinhu, mhepo yekuvhara roller inopinda muhupenyu hwepamba. Saka ndezvipi zvakanakira zvemhepo isina roller roller?
1.Sun chiratidzo chekuita
Iyo isina kuvhara mhepo roller shutter inogona kuratidza kwakawanda kwezuva, uye kugadzirisa mwenje wezuva kupinda mukamuri. Kushandiswa kwaro hakuiti nzvimbo.
Hwindo Roller Kunze kweSunshades Vinyl Sunscreen Blinds Mucheka
China Roller inopofumadza
Parizvino, kune akasiyana smart smart sunshade zvigadzirwa pamusika. Kune vatengi, sei kutenga zvigadzirwa zvakanaka kubva kune zvakawanda zvigadzirwa? Kazhinji, inogona kuve yakakamurwa kuita anotevera mapoinzi.
(1) Brand: Sarudza zvigadzirwa zvine yakakwira mhando yekuziva, uye mhando uye yekutengesa masevhisi anofanirwa kuvimbiswa;
(2) Rinoshanda: Kana vachitenga zvigadzirwa, vatengi havafanirwe kungosarudza zvigadzirwa nehunyanzvi hwekugadzira, asi zvakare teerera kune kushanda kwezvigadzirwa;